Egosiputara otutu ihe nke Redmi na Snapdragon 855 nke Lu Weibing | Gam akporosis
Ọtụtụ atụmatụ nke Redmi na Snapdragon 855 nke Lu Weibing gosipụtara
E gosipụtara na Redmi, ụdị Xiaomi nke na-arụ ọrụ n'adabereghị na ya, na-arụ ọrụ na a flagship smartphone na processor Qualcomm Snapdragon 855.
Enwere ọtụtụ mkpọpu na mkpọtụ na nke a, Lu Weibing, onye isi ala Redmi nọ na-arụsi ọrụ ike na mgbasa ozi mmekọrịta, na-eme ka ụfọdụ ịkọ nkọ banyere ọrụ na atụmatụ ekwentị, dị ka ndị anyị gwara gị banyere ya.
Ndị isi ahụ, n'oge a, gosipụtara, site na Weibo, na ekwentị ga-abịa na igwe ihe igwefoto obosara. E kpughere ya na mbụ na ọ ga-enwe ntọala igwefoto atọ na azụ, nke nwere ihe mmetụta 48 MP + 13 MP + 8 MP, dị ka ndị dị na Mi 9 SE.
Ekwuola ya na Ọkọlọtọ Redmi na-esote ga-abịa na nkwado maka eriri igwe isi 3,5mmyana NFC. N'aka nke ya, ozi a na-akọbu na mbụ na-egosi na ekwentị ahụ ga-ewepụta ihuenyo 6.3-inch yana mkpebi ihuenyo FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080.
N'okpuru mkpuchi, dabere na nkwụsị ndị gara aga, kwadebe ihe ruru 8 GB nke Ram na 256 GB nke ebe nchekwa dị n'ime. Ọ ga-abịarukwa na onye na-ejide ihe nkpuchi 32 MP maka ịme onwe ya na ịkpọ oku vidiyo.
Na ngwanrọ ngwanrọ, anyị nwere olile anya na smartphone ga-ebute arụnyere na sistemụ arụmọrụ A gam akporo 9 achịcha dabere na mbipute kachasị ọhụrụ nke MIUI 10. Nakwa na ọ na-abịa na nkwado maka ụfọdụ ụdị nke ngwa ngwa ụgwọ, ọ bụ ezie na anyị ka na-amaghị ike batrị ọ nwere ike ijide.
Banyere aha ahụ, enwere ike ịmara ya dị ka Redmi X. Mana, onye isi ala Redmi, Lu Weibing, gosipụtara na nso nso a na ọ gaghị abụ nke a na nke ahụ ekwentị ga-enwe aha ka mma. Nke a na-egosi na Redmi X bụ ụdị aha dị n'ime ma ọ bụ aha ekwentị ọzọ na-arụ ọrụ na chipset. Snapdragon 730.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ọtụtụ atụmatụ nke Redmi na Snapdragon 855 nke Lu Weibing gosipụtara
Esi edozi nsogbu ezighi ezi na Telegram